Izay madio am-po no hahita an'Andriamanitra
Titosy 1:15 « Madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin’ ny olona madio; fa raha amin’ ny olona voaloto sady tsy mino kosa dia tsy misy madio na inona na inona; fa voaloto na ny sainy na ny fieritreretany. »
Ry havana malala rehetra ao amin’ny Tompo, mbola ampitomboin amintsika mandrakariva anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.
Izany indray no tenin’Andriamanitra tonga amiko sy aminao androany, taratasy nosoratan’I Paoly ho an’ny vahoaka tao Titosy izy ity. Entiny hanambarana amin’ny olona fa fahadiovana dia avy amin’ny olona tsirairay avy ihany izany. Safidin’ny olona tsirairay ihany koa, raha ny amin’ny ara-nofo ny hoe "madio" dia izay manaja ny manodidina azy, tsy manary fako na loto etsy sy eroa, manao fanamiana voadio sy voasasa; manao fatafiana mihaja na mendrika, izay raha ny endrika ivelany no jerena. Fa raha ny ara-panahy kosa indray no jerena, ny olona madio dia ny olona izay efa nandray an’i Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainany, efa vita Batisa; satria ny io no làlana iray ahafahan’ny olona iray ho tonga zanak’Andriamanitra. Ny olona madio ihany koa dia ny olona vita fibebahana, ny matoanteny hoe “mibebaka” dia midika hoe “miova hevitra ny amin’ny zavatra natao taloha (na nokasaina hatao), na ny fitondran-tena narahina taloha (na nokasaina harahina), satria manenina na tsy afa-po.” Midika koa izy io hoe “mahatsapa nenina, alahelo, na enjehin’ny eritreritra, noho ny zavatra natao na tsy natao.” Izany no hevitr’ilay teny hebreo hoe “na•cham'" ao amin’ny andinin-teny maro. Ny hoe “na•cham′” dia mety hidika hoe “manenina, misaona, mibebaka” (Eksodosy 13:17; Genesisy 38:12, Joba 42:6), sy hoe “mionona” (2 Samoela 13:39). Koa izany no mahatonga antsika hanao ny fibebahana mba hanadiovan’Andriamanitra antsika, satria maro ireo ota izay efa natao tamin’ny andro lasa. Ny lasa rehetra dia ny fahazaran-dratsy, ny filalaovan-dratsy, ny fosotroana, ny fifohana zava-mahadomelina, ny fijangajangana, ny fanompoan-tsampy, ireny rehetra ireny dia ibebahana avokoa raha te hadio ny olona iray. Izany dia tsy ho azontsika anefa raha tsy efa nandray an’I Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy ny fiainantsika isika. Koa meteza àry hampitoetra an’I Jesosy Kristy tompo ao am-pontsika, hampanjaka Azy eo amin’ny fiainantsika; ka ahatsampantsika tahaka an’I Paoly hoe “tsy izaho intsony no velona fa I Kristy no velona ato anatiko.” Izany hoe: mila maty aloha isika, mety ho gaga ianao hoe: hamono tena ve izany? Tsia tsy izany, fa mila mamono ny nofontsika aloha isika, satria ity nofontsika ity dia mandalo ary mety lò; ary ity tenantsika ity no mitarika antsika hanao ratsy mandrakariva; Koa mila mitafy sy miaina ilay nofo tsy mety lò, dia ilay avy amin'Andriamanitra Raintsika izany. Satria isika efa mino fa Jesosy Kristy no Zanak’Andriamanitra tonga tety ambonin’ny tany ka hamonjy antsika zanak’olombelona amin’ny fahotana, nanadio antsika noho izany fahotana izany. Ka izany no mahatonga antsika mila ateraka indray araka ny ao amin’ny Jaona 3:3, izay manambara ilay fahateraham-baovao, ka hahafahana mandova ilay fiainana mandrakizay.
Mila mamono ny amin’ny tenantsika manotolo aloha isika na ity nofontsika ity, manahoana moa izany olona maty izany? Ny olona maty dia tsy manana olana, tsy manana ahiahy, tsy manana alahelo, tsy afaka mieritreritra. Izany hoe tsy mahatsapa na inona na inona, ry Havana raha mbola tsy maty niaraka tamin’I Jesosy Kristy ianao, dia mbola mahatsapa izany rehetra izany. Fa rehefa maty miaraka amin’I Kristy kosa dia tsy afaka mijangajanga, ny mandeha amin’ny fanaon’izao tontolo izao; maharikoriko anao na ny manota aza, na manao ireo filàn’ny nofo, izay mandoto antsika mandrakariva. Ka ho tanteraka amintsika ny tenin’Andriamanitra izay voalaza ao amin’ny Titosy eto hoe:” Madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin’ ny olona madio”. Satria efa nametraka an’I Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy ny fianantsika isika dia tafatoetra ao anatintsika ilay mazava, izay afaka mandrava ny aizina rehetra. Araka ny ao amin’ny Jaona 8:12 “Ary Jesosy niteny tamin’ ny olona indray ka nanao hoe: Izaho no fahazavan’ izao tontolo izao; izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin’ ny maizina, fa hanana ny fahazavan’ aina. “
Ry Havana malala ao amin’ny Tompo, ny olona ratsy kosa indray dia ratsy amin’ny fisainana, ny fiteny; ny fihevitra; ny fomba amam-panao rehetra dia ratsy avokoa izany. Araka ny volaza eo amin’ny tapany faharoa amin’ity tenin’Andriamanitra ity. Hitantsika raha alaina ohatra amin’izao fotoana izao fotsiny, ny olona ratsy dia mikaroka ny zavatra ratsy, ny famonoana olona. Ary tokony ho tsaroantsika ihany koa fa ny devoly dia miasa 24h sur 24h, ka miasa ny hamono sy handrava, ary manao izay hanakorontanana sy hanimbana antsika zanak'Andriamanitra. Ny handavoana antsika amin'ny ratsy mandrakariva, ka maniraka ireo miaramilany eny amin'ny tontolo rehetra eny izy. Ohatra manana vola ilay olona dia tsy mampaninona na dia mandatsaka ny ainy aza, noho ny asan’ny devoly manjaka ao anatiny, dia fahafinaretana hoazy izany;. Ireo mpangalatra sy totakely marosamihafa. Ny fanolanana zaza tsy ampy taona rehetra io, dia avy amin’ilay ratsy avokoa izany. Ary tena tanteraka tokoa ny hoe: “fa voaloto na ny sainy na ny fieritreretany.”. Satria ny filan’ny nofo no mibaiko azy ka tsy mahalala afa-tsy ny nofo ihany, tsy mieritreritra ny hafa ihany koa fa dia manjaka ny fitiavan-tena. Araka ny voalaza ao amin’ny 1 Timoty 6:9-10: “Ary izay ta hanan-karena dia latsaka amin’ny fakam-panahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra, izay mandetika ny olona ao amin’ny fandringanana sy ny fahaverezana. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily niala tamin’ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin’ny alahelo be.” Ny olona ratsy dia tsy manana fiadanana, tsy manana fifaliana, fa dia mitady sy mieritreritra mandrakariva ny handravana sy hamotehana ny hafa hatrany, tsy malala ny fahorian’ny hafa, mitoetra amin’ny tsy fahononan-tena, fa mikatsaka zavatra hafa hatrany. Hitantsika etsy sy eroa ihany koa ireo manao fitafy tsy maontina sy ireo olona manao izay hisarihana ny hafa mba hanao ny fijangajangana izany, maneho fitanjahana etsy sy eroa, ireny rehetra ireny dia avy amin'ilay ratsy avokoa. Koa aoka àry ry havana tsy ho avimintsika ihany koa no hahatonga izany, fa tsy tian'Andriamanitra isika rehetra izao ny hisy ho very na dia iray aza. Raha efa nandeha tamin'izany làlana izany ianao, na mbola ao anatin'izany rehetra izany. Tsy mbola tara, mandehana manatona an'i Jesosy Kristy Tompo, mbola mandray anao Izy, mbola tia anao Izy; miverena mitodiha aminy fa tsara sady be famindram-po io Tompontsika io. Anio ihany dia atolory ny tenanao, ny fiainanao hoan'i Jesosy, koa sahia miteny hoe: "Jesosy inty aho, ilay nania, ilay nanao izay rehetra tsy nety teo anatrehanao. Mamelà ny heloko, meteza ianao Jesosy hanadio ahy, hanafaka ahy amin'ireo fahazan-dratsiko rehetra. Ny làlana izay nihodinako taminao rehetra, koa mamindrà fo amiko re Jesosy. Inty aho vonona hanompo anao, hiverina aminao, hanambara ny fahatsaranao, mandray anao ho Tompo sy Mpamonjy ny fiainako, meteza ianao hitoetra ato anatiko, omeo ny Fanahinao Masina, mba hitonboko mandrakariva ny amin'ny fahalalana Anao Jesosy. Araka ny teninao hoe: "minia tsy mijery ny andron'ny tsy fahalalana" Koa inty aho Jesosy miankohoka eto anatrehanao, fa na ny anjely any andanitra aza anie dia miankohoka noho ny halehibeazan'ny voninahitrao. Koa manaja anao amin'ny foko rehetra aho Jesosy, vonona aho ny hanao ny sitrakao, sy izay voalaza ny teninao. Raiso aho Jesosy, inty aho ilay naditra teo anoloanao, nanao izay rehetra nampalahelo anao, nanao tsinontsinona ny fanavotana izay natanao ahy; ka nihantonanao teo ambonin'ny hazo fijaliana, ary mbola nanombo anao hatrany. Inty aho, raiso aho, vonona aho ary hanaraka anao. Manaiky anao ho Tompo sy Mpamonjy ny fiainako. Misaotra Jesosy ö! Amen
Fijoroana vavolombelona iray no hoentiko amintsika eto. Misy tonkatrano roa samihafa ireto hoentiko eto amintsika. Ny iray olona tsy dia azo lazaina hoe mahantra, fa somary sahirana ara-pivelomana; sady olona tena tia an’Andriamanitra. Rehefa tonga ny fotoana fandraisam-bola, ny azy ireo dia 500 000Fmg izay no vola miditra ao amin’io tokantrano io isambolana. Vao azo ny vola dia fiderana an’Andriamanitra no atao, esorina ny ampahafolony, ary rehefa misy vahiny aza dia amim-pifaliana sy amim-pitsikitsikiana tokoa no andraisana izany vahiny izany. Alaina ny mofo gasy, vilia gasy, miampy dité sy ronono aroso hoan’ny vahiny. Dia mbola miaro tsikitsiky izany, sady mbola anotaniany ary ianao hoe oviana indray ianareo no miverina? Fa ny an’ilay tokatrano iray kosa indray dia tokantrano manan-karena. Rehefa tonga ny faran’ny volana ny azy indray dia 10 Million Fmg no vola miditra ao amin’ity tokantrano iray ity. Vao tonga anefa ny vola dia misento ny iray trano hoe: “Andriamanitra ô! Aiza indray re ahitana hamenoana ity e!”, samy tokantrano mahalala an’Andriamanitra avokoa ireo, fa samihafa ihany koa anefa ny fanompoany Azy. Iza amin’izy roa ireo àry ny no tena mahay mankasitraka raha araka ny hevitrao?
Tena marina ny anao fa ilay voalohany no mahay mankasitraka, izany hoe rehefa tsara ny fiasainan’ny olona, mahay mionona amin’ny zavatra izay misy eo aminy izy; mahay mifaly amin’izay ananany. Fa ny olona ratsy kosa dia tsy mahay mionona amin’izay anany, hany ka lasa manitatra zavatra hafa indray mba hanatevenana izay eo an-tànana. Ny olona tsara dia madio fisainana mandrakariva, na manome zavatra olona aza izy dia izay am-pony tokoa no avoakany. Fa ny an’ny olona izay maloto fo na ny olona tsy mahay mionona, na mandray vahiny aza izy ka manome sakafo, na zavatra olona iray dia arahina fimonomononana izany. Tsy misy fankasitrahana fa arahina alahelo. Ry Havana malala ao amin’ny Tompo. Anjarantsika ny misafidy ny làlana tsara izay alehantsika. Aoka isika hahay hampionon-tena, mahay mankasitraka izay anana, fa tsy tokony hitsirirtra ny hafa ihany koa. Ka ho tanteraka aminao ny tenin’ny Tompo hoe:”nahatoky tamin’ny kely ianao; ka ataoko ho mpanapaka ny be.”
Koa mahaiza misafidy, ary mibebaha mandrakariva, fa mety misy tsy fantatsika ny fahotana izay vitantsika, ary tanterao ny tenin’I Kristy hoe: “ Fa mianbena ka mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo ka mandosira izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsagana ao anatrehan’ny zanak’olona..” ; “Fa raha diso amin’ny zavatra iray loha ianao dia diso amin’izy rehetra.” Koa aoka isika hanao tahaka an’I Paoly hoe:”eny, miezaka hanatratra ny marika aho hahazoako ny lokan’ny fiantsoan’Andriamanitra any ambony ao amin’I Kristy Jesosy”.
Ny voninahitra anie dia ho an’Andriamanitra irery ihany. Amen